Shirweyne ay Jaaliyada Beesha Garxajis ee Belgium ku qabsatay lagalada Antwerpen iyo go’aamadii kasoo baxay. | Qaran News
Shirweyne ay Jaaliyada Beesha Garxajis ee Belgium ku qabsatay lagalada Antwerpen iyo go’aamadii kasoo baxay.
Writen by Qaran News | 6:30 am 6th Aug, 2018
Beesha Garxajis ee ku dhaqan wadanka Belgium ee xarunta Midowga Yurub ayaa shalay oo taarikhdu ku beegnayd 04/08/2018 ku qabsadeen shirweyne balaadhan Magaalada Antwerpen ee Boqortooyada Belgium, (koninlijk Belgie). Shirkaas oo ahaa shir aad u balaadhan layskaga kala yimidna dhamaan Gobolada uu Wadankan ka kooban yahay, waxaa sidoo kalana marti ku ahaa Siyaasi Ahmef Shell oo ka mida Siyaasiyiinta waaweyn ee Soimaaliyeed oo halkaa dardaaran iyo taarikh muhiim ah uga jeedayay kasoo qayb galayaashii Shirkaa.
Shirkaas oo u dhacay jawi dagan aadna, layskugu xogwaraystay waxa laysla qaatay in laga shaqeeyo midnimada Beesha Garxajis, lana taageero mashaariicda horumarineed ee ka socda Deegaanada balaadhan ee Beeshani dagto. Waxaa kale oo aad loo taageeray wada nolaanshaha iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya beesha iyo Beelaha kale ee ku nool gayiga Somaaliyeed ee Beeshani dagto.
Gabagabadiina waxa kasoo baxay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yahiin qodobadan hoos ku xusun.
1. Waxay Jaaliyada Beesha Garxajid ee ku dhaqan Wadanka Biljim wi buuxda u taageersantay go,aamadii kasoo baxay shirkii Garxajis ee Gacan Libaax.
2. Waxay Jaaliyada Garxajis ee Biljim ugu baaqaysaa dhamaan Beesha Garxajis gudo iyo dibadba inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wax wada qabsiga beesha Garxajis, lama taantaan iyo muqadasna ay tahay danta reerku.
3. Waxay Jaaliyada Garxajis taageersantay waanwaanta iyo dadaalada lagu soo afjarayo coladii Ceelafwayn, waxayna Illahay uga baryeeysaa nabad waarta iyo inay dantooda gartaan dadkaas Allah ku wada abuuray Deegaankaas.
4. Jaaliyadu waxay ugu baaqaysaa in ayna Beeshu indhaha ka qarsan Cadaalad darada iyo musuqa baahsan ee Dalkii ku habsaday, kana shaqaysoo sidii Dalka loo badbaadin lahaa inta ayna talo faro ka haadin.
5. Jaaliyadu waxay ugu baaqaysaa Jaaliyadaha Beesha Garxajis inay u istaagaan sidii Dowladaha caalamka looga dhaadhicin lahaa tacadiga iyo cadaalad darada Somaliland ka taagan si looga hor tago burburka iyo qabyaalada uu maamulka Muuse Biixi Dalka ka wado.
Shirku waxuu kusoo gabagaboobay si qurux badan, waxaana laysla qaatay in la joogteeyo shirarka noocan oo kale ah.